स्वस्थ रहन के गर्ने , के नगर्ने ? (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
स्वस्थ रहन के गर्ने , के नगर्ने ? (भिडियोसहित)
१८ श्रावण २०७७, आईतवार १८:४६
स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा छ कि छैन भनेर गरिने विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणको समूहलाई नै ‘होलबडी’ चेकअप भन्ने गरिन्छ । यसमा बिरामीको आग्रह र चिकित्सकको सल्लाह अनुसार परीक्षण गरिन्छ । कुनै पनि रोगको लक्षण बाहिर देखिनुभन्दा अघि नै पत्ता लागेमा छिटो निदान गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । जस्तो सुकै रोग पनि निको हुने सम्भावना बढि मात्रामा हुन्छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणको मुख्य उद्देश्य भनेको मानिसको स्वास्थ्य स्थिती कस्तो र कुनै रोगले गाँजेको छ छैन भनेर थाहा पाउनु हो । रोग लाग्ने सम्भावना वा त्यसको जोखिम भविष्यमा के कति छ भनेर स्वास्थ्य परीक्षणद्वारा थाहा पाउन सकिन्छ । हाम्रो समाजमा दीर्घकालिन रोगहरु बढ्दै छ । जस्तै मधुमेह, रक्तचाप, हृदयघात, स्ट्रोक आदि छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हृदयघात कति बेला हुन्छ थाहा पाउन सकिंदैन तर हृदयघात हुने सम्भावना कति छ भन्न सकिन्छ । रोग लाग्ने वा त्यसको जोखिम भविष्यमा के कति छ भनेर स्वास्थ्य परीक्षणद्वारा थाहा पाउन सकिन्छ ।
१६ देखि २५ वर्षको उमेर समुहलाई बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई जसरी छिटै रोगहरुले समाउँदैन । वंशाणुगत रोगहरु छ भने जाँच गराउनु पर्छ । बालबालिकाहरुमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु जरुरी हुन्छ र ५० वर्ष कटेका व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु आवश्यक पर्छ ।
महिलाले होलबडी चेकअप गराउँदा मूख्यगरि प्रजनन स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भनेर जाँच गरिने गरिन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलामा बढि स्वास्थ्य समस्या हुने गर्छ । महिलाहरुको होलबडी जाँच गर्दा प्रजनन मात्र नभएर क्यान्सर , एच.पि.भि, डिम्बग्रन्थिको क्यान्सर, गर्भाशयको क्यान्सर, महिनावारीको समस्या महिनावारी सुकेपछिको समस्याहरुलाई होलबडी जाँच गर्दा समावेश गर्नुपर्छ । साथ–साथै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ किन भने हाम्रो समाजमा महिला स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिदैन जस्ले गर्दा मानसिक चिन्तालाई प्रोत्साहन गर्छ ।
यसै विषयमा हामीले एक भिडियो रिपोर्ट बनाएका छौं । हेरौं भिडियोमा :
स्वस्थ रहन के गर्ने
Prevनबिल बैंकलाई उत्कृष्ट बैंकको उपाधि
आजका मूख्य खबर केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा(भिडियोसहित)Next